मनाङको ह्याट्रिक यात्रामा झापा बाधक बन्न सक्ला ? | Hamro Khelkud
मनाङको ह्याट्रिक यात्रामा झापा बाधक बन्न सक्ला ?
झापा – घरेलु फुटबलको पछिल्लो एक महिनाको परिणामलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबको प्रदर्शन उच्च रहँदै आएको छ ।
एक महिनामा टोली नकआउट फुटबलको चौथो फाइनलका लागि जुटिरहेको छ । घरेलु फुटबलमा यो सफलता सानो आक्न मिल्दैन । पुसको २३ गते टुबोर्ग हेटौंडा गोल्डकपको फाइनल खेलेको मनाङ सोमबार रमपम झापा गोल्डकपको फाइनलमा आयोजक झापा ११ विरुद्ध उत्रदैछ । झापा त्यो टोली जसले मोफसलमा अलग्गै पहिचान बनाएको छ । मनाङ, रुस्लान थ्री स्टार क्लब र विभागिय टोली पनि झापासँग सचेत भएर खेल्ने गर्दछन् । झापाले पनि अघिल्लो महिना काँकरभिट्टा गोल्डकपको उपाधि उचालेको थियो । यता मनाङको प्रदर्शन भने निकै लोभलाग्दो छ । हेटौडामा पुस २३ गते आर्मीसँग फाइनल हारेपछि मनाङले माघको ३ गते सुदूरपश्चिमाञ्चल खप्तड गोल्डकप र माघ १५ गते पोखरामा आहा रारा गोल्डकपको उपाधि जितेको थियो ।
आर्मीसँग २–० को हार बेहोरेको मनाङले पछिल्ला दुवै फाइनल १–० ले जितेको थियो । अब मनाङ उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने दाउमा झापाविरुद्ध उत्रदैछ । तर, झापालाई पन्छाउँदै उपाधि जित्नु मनाङका लागि सहज भने हुने छैन । झापा सजिलै हार मान्ने टोली होइन । पछिल्लो दुई बर्ष झापाले घरेलु फुटबलमा जुन छाप छोडेको छ, त्यो ए डिभिजन टोलीका लागि नै चुनौतिपूर्ण रहेको छ । मनाङले अघिल्ला तीन र आजको फाइनलमा अलग अलग टोलीको सामना गर्दैछ । हेटौडामा आर्मी, खप्तडमा सिएमजी क्लब संकटा र पोखरामा आयोजक सहारासँग फाइनल खेलेको थियो । यसपटक झापालाई उसकै मैदानमा हराउने चुनौति मनाङसँग छ ।
झापा गोल्डकपको फाइनल आयोजकका लागि भने नौलो होइन । गत बर्ष टोली आर्मीसँग फाइनलमा हारेको थियो । यसपटक आर्मी सेमिफाइनलमै रोकियो । मनाङ पहिलो पटक झापा गोल्डकपको फाइनल खेल्दैछ । मनाङको उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने दाउमा झापा बाधक बन्न सक्ला ?